Nahatratra ny taona vaovao i Global Voices! · Global Voices teny Malagasy
Nahatratra ny taona vaovao i Global Voices!
Voadika ny 01 Janoary 2009 11:22 GMT
Nandalo fanavaozana maro dia maro sy mahafinaritra ny Global Voices tamin'iny taona nivalona iny ary ho avy ny fehin'izany.
Finaritra aho raha tafiditra amin'ity vondrona mpanoratra, mpandika teny, mpikatroka ary mpamaham-bolongana manantalenta sy mavitrika ity tamin'ny volana aogositra. Amin'ny mahatale mpanantanteraka vaovao ahy dia nahita zava-baovao isan'andro aho, ary dia tsy mitsanga-menatra anisan'ity fiaraha-monina ity noho ny fivelaran'ny serasera ka nitady lalana vaovao hanohanana ny asantsika.
Nisy maromaro ihany ny fiovana lehibe tamin'iny taona 2008 nivalona iny. Voalohany, raha notohanan'ny Berkman Center for Internet & Society ao amin'ny Anjerimanontolon'i Harvard isika hatramin'ny taona 2005, dia nandray an-tanana ny ho aviny ny Global Voices raha nisoratra anarana ho fikambanana mahaleo tena tsy mitady tombontsoa. Ankehitriny ary isika amin'ny fomba ofisialy dia antsoina hoe “Amboradara-na Global Voices,” andrim-piahiana natao hanohana sy hanamora ny fitaovam-pampitambaovaon’ olom-pirenena tsotra sy ny famahanam-bolongana mijoro any Pays-bas.
Tsy miova ny iraka: manasongadina ny resaka sy ny vina tena mahaliana avy amin'ny fitaovam-pampitam-baovaon'olo-tsotra manerana izao tontolo izao; manohana ny feo vaovao mivoitra ; ary miaro ny fahalalaham-pitenenana manerana izao tontolo izao.
Raha mbola mitohy ny fifamatorana akaiky amin'ny Berkman, dia efa nahatsangana ny Filamn-kevitra mpanatanteraka, eo ihany koa ny ekipa izay tsy mitsaha-mitombo, ary ny fitantanana izay mahaleo tena. Na dia Hôlandey aza no nisoratana anarana, dia tena avy amin'ny lafy valo kosa eo amin'ny karazana ary virtoaly eo amin'ny fiasantsika.
Tsy manana birao isika; fa izao tontolo izao aza no toeram-piasantsika. Avy any Tokyo, Rio de Janeiro, Hong Kong, Bahrain, Utah, ary Massachusetts ny mpikambana ao amin'ny filan-kevi-pitantanana; Ny ekipa kosa any Trinite & Tobago, Taipei, Hague, Washington D.C., Toronto, mpivezivezy any Copenhagen, Pôrtô Rikô, ary New York, na tsy manan-trano, tratran'ny fisidinana mankaty Antananarivo, Dhaka, Durban, El Alto ary Kolkata. Ny mpanao fanitsiana ny soratra sy ny mpamoaka lahatsoratra (editor) kosa hita any amin'ny toerana tahaka ny any Brasilia, Cochabamba, Almaty, Kiev, Paris, ary Beijing, ary hita na aiza na aiza kosa ny mpanoratra.
Tamin'ny voalohany, dia tetikasa atsangan'olona manolotena, ezaka ataona fiarahamonina ary tohanan'ny mpanome fanampiana an-tsitrapo ny Global Voices. Nitombo sy nivelatra hatrany ny vondrona tamin'ny 2008; Ankehitriny dia 120 ny mpanoratra ary eo ho eo amin'ny 130 ny mpandika teny manokana ny fotoanany sy ny heriny hahombiazan'ny GV.
Mitombo ihany koa ny GV eo aminn'y lafiny ara-bola. Anisan'ny mpanampy anay amin'izany moa ny MacArthur Foundation, Reuters, the Knight Foundation, Hivos, the McCormick Tribune Foundation, Google, ary ny Open Society Institute. Tsara vintana ihany koa isika amin'ity 2009 ity fa tohanan'i Media Development Loan Fund eo amin'ny fanaovana teti-panorona, noho ny fanohanany amin'ny fandoavan-ketra, sy amin'ny fanampiana hataony amintsika. Ary mbola mahazo fanohanana avy amin'ny New World Foundation sy ny Arca Foundation ihany koa isika. Ary raha niteraka fahasahiranana ho an'ny rehetra ny krizy ara-pitantanam-bola tamin'iny 2008 iny, dia manantena izahay fa mbola ho afaka hamporoborobo ny Global Voices hatrany isika amin'ny alalan'ny ezaka ataon'ny mpanolotena, fanomezan'ny mpanohana, fiaraha-miasa miaraka amin'ny mpampahalala vaovao hafa, [ syndication,] ary amin'ny mety hametrahana dokambarotra ihany koa.
Noho izany indrindra no nametrahana vao tsy ela akory izay ny fomba fanomezana fanampiana, entintsika handoavana ny lany amin'ny fampandehanana ny efitra fanomezam-baovao sy ny lanin'ny [fanofana] serasera (server), ary hanohanana ny ekipakelintsika. Na dia fandraisana anjara bitika aza dia efa ahafahanay mitondra ho anao ny tantara tsara indrindra an-tserasera sy ny vaovao avy amin'ny fiteny samihafa manerantany.
Nanana taom-pahombiazana isika eo amin'ny fandaharan'asa ary efa mientanentana tokoa amin'ny asa sy ny tetikasa rehetra izay efa miandry antsika amin'ity taona 2009 ity.
Vondrona mpanoratra ato amin'ny Global Voices nandritra ny vovonana GV tany Budapest ny Jone 2008 (sary Joi Ito)
Nahazo fankasitrahana iraisam-pirenena noho ny fanasongadinana tantara tsy heno isika; tsikaritra ilaina isika indrindra indrindra eo amin'ny fotoanan'ny krizy sy ny voin-janahary. Voangona ao amin'ny Takelaka manokana ireny, izay raha ny taona 2008 no jerena dia nifantoka tamin'ny herisetra nandritra ny fifidianana tany Kenya, ny rivodoza tany Myanmar, ny horohorontany tany Sichuan, ny ady tany Ossetia atsimo, ary ny fanafihana tany Bombay, India. Nanana fiaraha-miasa manokana tamin'ny Reuters koa isika nandritra ny Lalao Olaimpika tany Beijing, sy tamin'ny Voices without Votes (feon'ny tsy afa-mifidy), niresaka ny fifidianana filoham-pirenena tany Etazonia. Mbola hanohy ny fitondrana ny vaovao sy tantara tsy naranty na tsy voatatitra loatra isika amin'ity taona 2009 ity, mba ho fanilon'ny fitateram-baovao iraisam-pirenena izay tsy mitsaha-mitotongana amin'izao fotoana izao.
Ny sampana mirotsaka an-tsehatra, Rising Voices, moa amin'izao fotoana izao dia manohana tetikasa 17 hitondra ny famahanam-bolongana sy fitaovam-pampitam-baovao any amin'ny fiaraha-monina tsy hita loatra an-tserasera manerantany. Niainga avy amin'ny fanomezana madinidinika sy ny fandaharam-panazarana ny Rising Voices ka nivelatra ho amin'ny tetikasam-piaraha-monina an-tserasera mpampita vaovao izay mifampizara fahalalana, fanazarana ary ny fomba fanao tena tsara. Hanohana tetikasa madinika hafa izahay amin'ity Janoary ity, ary mikasa ny hanitatra ny asa hihoatra ireo efa nahazo fanampiana mba hanohana ihany koa ny tetikasan'ireo fiaraha-monina fampitam-baovao manomboka mivelatra.
Ny sampana mandika teny, Lingua, kosa moa dia mandika ny Global Voices ho amina fiteny 16 samihafa. Haingana dia haingana tsy mampino ny firoborobon'ny Lingua, niainga taminn'y teny Shinoa sy Esipaniolona tamin'ny fanombohan'ny taona 2007, ka lasa “iray amin'ireo vondrona fandikan-teny an-tserasera lehibe indrindra manerantany.” Mety mbola hitombo ity vondrona Lingua ity mandritra ny taona 2009, fa efa misy fiteny dimy hafa eo am-pananganana vohikala amin'izao fotoana izao.
Niasa tokoa ny tetikasa Advocacy , miatrika ny fitomboan'ny faneriterena sy ny tsindry mahazo ny mpamaham-bolongana maneratany. Ny mpanao gazety an-tserasera indray tamin'iny 2008 nivalona iny no tena lasibatry mpamoaka fantsom-baovao anaty tontolon'ny fanenjehana. Ho valin'izany, dia nitatitra ny fisiana fanenjehana fampitam-baovao an-tserasera tany amin'ny firenena 40 ny GV Advocacy, ka nitarika ny fanazarana sy ny fiarovana tany amin'ny famelabelaran-kevitra sy tany amin'ny atrikasa, ary nanome torolalana sy fampahalalana ny famahanam-bolongana miafin'anarana sy toerana sy ny fampiasana ny fitaovan'ny web 2.0 hiarovan-tena. Efa voadikanay tamin'ny fiteny fito izany torolalana izany ary efa nisy nitovo mihoatra ny in-12 000 nandritra ny 14 volana farany. Mbola hotohizana ny tetikasa amin'ity 2009 ity,ary hamelatra ny fitateranay vaovao amin'izay fanenjehana mpamaham-bolongana ary tafiditra amin'izany ny fitaterana raki-dresaka sy lahatsary.
Ny iray amin'izay tena mahaliana anatin'ny vondrona Global Voices dia ny fampiasan-doha hikaroka hevitra, tetikasa ary fomba fiasa vaovao mandrakariva (brainstorming). Niainga tamin'ny fizàrana hahalala ny hery vaikan'ny serasera ny GV ary ny ankamaroan'ny tetikasa nahomby indrindra dia nivoaka ay amin'ny tsirairay tanatin'ny tambajotrantsika. Mino aho fa hahita hevitra hamoaka zavatra tsy ho tontosa mihitsy raha tsy eo ny fandraisana anjaran'ny tsirairay mampiasa ny talentany, ny fahalalany ary ny fahavitrihany avy isika amin'ity taona 2009 ity.
Avy amin'izany indrindra dia mampirisika anareo izahay hiaraka aminay! Misorata anarana handray amin'ny imailaka daily digest sy RSS feeds, ary aza misalasala manoratra aminay raha te-ho mpanoratra na mpandika teny (na mpanome fanampiana!) ato amin'ny Global Voices ianao.
Isaorana ny rehetra, ary arahabaina nahatratra ny Taona Vaovao.
2 ora izayAmerika Latina